Cumar Filish & Xildhibaannada Hawiye oo dood ka yeeshay 13-ka Sanoter - Awdinle Online
Cumar Filish & Xildhibaannada Hawiye oo dood ka yeeshay 13-ka Sanoter
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa caawa kulan casho u sameeyay Xildhibaannada labada Gole ee kasoo jeeda Beelaha Hawiye.
Dood kulul ayaa ka dhex socota Xildhibaannada oo ku saabsan arrinta kuraasta 13-ka Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo horay u meel mariyay Golaha Shacabka oo aan lagu soo darin heshiiskii siyaasadeed ee doorashada.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa ku dhaliilay Madaxweyne Farmaajo, Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir inay ka gaabiyeen dhaqan gelinta 13 kursi oo aan haba yaraatee heshiiskii Dhuusamareeb 3 iyo heshiiskii Muqdisho aan lagu soo hadal qaadin.
Xildhibaannada qaar ayaa soo jeediyay kuraasta 13-ka in berri laga ansixiyo Labada Gole ee Baarlamaanka oo wadajir ugu balansan ansixinta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada.
Previous articleLaamaha Ammaanka oo gacanta ku dhigay Nin hoobiye tuurayay
Next articleSawiro:- Maxaa Caawa ka socda Madaxtooyada Koonfur Galbeed?